Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay weerarkii New Zealand – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay weerarkii New Zealand
Maarso 15, 2019 12:59 g 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku biiray Madaxda Caalamka ee cambaareysay weerarkii argagaxiso ee Maanta oo Jimce ah lagu qaaday Masaajidyo ay ku cibaadeysanayeen dad Muslimiin ah dalka New Zealand.
Fariin qoraal ah oo uu soo saaray Madaxweyne Farmaajo ayaa uu tacsi ugu diray ehelada dadkii Muslimiinta ahaa ee lagu dilay weerarkii ka dhacay Magalada Christchurch ee dalka New Zealand.
“Waxaan si xooggan u cambaareynayaa weerarka argagixisada ee naxdinta leh ee ka dhacay Magalada Christchurch, ee dalka New Zealand, kaas oo loo geystay dadka muslimka ah ee cibaadeysanayey, waxaana ku garab istageeynaa dowladda New Zealand iyo bulshada Muslimiinta sidii ay uga gudbaan dhibaatadaas.Waa inaanu midownaa argagixisada dhammaan ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Weerarkii Jimcaha Maanta lagu qaaday laba Masaajid oo ku yaalla Magalada Christchurch ee dalka New Zealand, ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan 50 Ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay.
RW Kheyre oo shaaciyey Natiijada kulankii uu la yeeshay Axmed Madoobe (Daawo)